အမြင်အာရုံတိုးတက်လာသည့် Kubuntu 13.04 installer | Linux မှ
အမြင်အာရုံတိုးတက်လာသည့် Kubuntu 13.04 installer
ချစ်သူ | | NOTICIAS
စတင် Kubuntu ၁၉.၁၀ ရိုင်းစိုင်းတဲ့လက်စွပ်အမြတ်ထွက်ခါနီးခါနီးနေပြီ။ ၏အစ်မဖြန့်ဖြူး၏ဤဗားရှင်းအသစ်၌တည်၏ Ubuntu ကို အဲဒီလောက် .... ရှိပြီ အမြင်အာရုံရှုထောင့်အပေါ်အများကြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအလုပ်၏ရလာဒ်များက၎င်းကိုထည့်သွင်းသူအတွက်ပင်အကျိုးရှိသည်။ နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရ, ယခုပို။ ပွတ်နှင့်ကြော့အသွင်အပြင်ရှိပါတယ်:
ယောနသန်သည် Riddell သူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ် အနုပညာအသစ် ပစ္စုပ္ပန် Kubuntu 13.04 ။ ၎င်းကိုသူ၏ဘလော့ဂ်တွင်တင်ထားသည့်သေးငယ်သည့်စာမူတစ်ခုတွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဖြန့်ချိမှုကိုဖြစ်နိုင်သမျှတည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်ဖြန့်ချိမှုပုံစံအသစ်ကိုရက်အနည်းငယ်ကြာစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသူများကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » အမြင်အာရုံတိုးတက်လာသည့် Kubuntu 13.04 installer
ကျနော်တို့သတိပြုမိပါပြီ ငါဒီ post ကိုရေးသားသူကိုအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ DesdeLinux မှာငါတို့မလိုအပ်ဘဲအခြား site တစ်ခုမှတစ်ခုခုကိုကော်ပီကူးရန် NOT အားဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နေသည်ဆိုတာသူသိကောင်းသိလိမ့်မည်။
A ချစ်သူ DesdeLinux တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားဆိုဒ်များမှကူးယူခြင်း / ကူးယူခြင်းမပြုပါကမူရင်းဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်
နောက်တစ်ခါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Carlos 😀
ငါတစ်ခုတည်းကိုသာတွေးမိ, ကူးယူထားပြီးကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသူတစ်စုံတစ် ဦး ကိုအမြဲတမ်းရှိကွောငျးကဘာလဲ? XDDDDDDDDDDDDDDD ကိုကူးယူခြင်းရှိမရှိကိုတစ်နေကုန်အသုံးပြုသောလူများရှိပါသလား။
ဒါက yeah xD ပုံရသည်! - ဟားဟား
၎င်းသည် Adobe CS3 တပ်ဆင်သူနှင့်တူသော်လည်းယခင် Ubiquiti ဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုကိုနှစ်သက်ပါက Ubiquiti နှင့်အခက်အခဲများရှိပါက Ubuntu ၏မည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆိုစာသားပုံစံတွင်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ကောင်းပြီ၊ Fedora 18 installer ထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်၊ သင်က disks များ၏အစိတ်အပိုင်းကို "medium" လို့မပြောဘဲ "3 quarts" ဆိုတာကိုဘယ်လိုထားရမယ်ဆိုတာခန့်မှန်းဖို့လိုပါတယ်။
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်တွင် FirefoxOS နှင့်စတင်ရောင်းချမည်